Laptọọpụ Ikpe Laptọọpụ nwere eriri pụrụ iche na sistemụ ikpere ọzọ. Ejiri m akpụkpọ anụ eji anụ arụgharị. Enwere ọtụtụ agba sitere na onye ọ bụla nwere ike bulie nke ya. Ebumnuche m bụ ime ihe dị mfe, laptop na-adọrọ mmasị ebe enwere mfe nlezianya na-elekọta usoro na ebe ị nwere ike ime ikpe ọzọ ma ọ bụrụ na ị ga - ebu maka nyocha Mac na pro na ipad ma ọ bụ mini ipad gị. Inwere ike ibu nche anwụ ma ọ bụ akwụkwọ akụkọ n’okpuru okwu gị. Ewu na-agbanwe agbanwe kwa ụbọchị.
Mbọsị Ụka 28 Novemba 2021
Mmiri Ozuzo Uzo mmiri ozuzo a bu ngwakọta nke mmiri ozuzo ozuzo, nche anwụ na akwa mkpuchi mmiri. Dabere na ọnọdụ ihu igwe na mmiri ole enwere ike idozi ya ka ọkwa nchekwa dị iche iche. Dị ya pụrụ iche bụ na ọ na-ejikọ mmiri ozuzo na nche anwụ na otu ihe. N'iji “nche anwụ mmiri” aka gị n'efu. Ọzọkwa, ọ nwere ike zuru oke maka egwuregwu dị ka ịnya igwe. Na mgbakwunye na n'okporo ámá mmadụ juru, ịbanyeghị na larịị ndị ọzọ ka ulọ mkpuchi na-agbatị elu gị n'ubu.
Mgbanaka Nke a bụ agwa dị ụtọ nke omimi. “Doppio”, n'ụdị ya na-agba gburugburu, na-aga n'ụzọ abụọ na-egosi oge ụmụ nwoke: ihe gara aga na ọdịnihu ha. Ọ na-ebu ọla ọcha na ọla edo nke na-anọchite anya mmepe nke omume mmụọ nke mmadụ n'oge ụwa ya niile.
Mgbanaka Na Pendant
Fraịdee 26 Novemba 2021
Mgbanaka Na Pendant Emepụtara mkpokọta Mma ahụ dị ka ụtụ maka oke ọhịa Amazon, ihe nketa abụghị naanị Brazil, kamakwa maka ụwa niile. Nchịkọta a na-ejikọta ịma mma nke okike na nghọta anụ ahụ nke akụkụ nwanyị ebe ọla ahụ na-adị ma na-akpachapụ ahụ nwanyị.
Tọọzdee 25 Novemba 2021
Wenezdee 24 Novemba 2021
Laptọọpụ Ikpe Mmiri Ozuzo Mgbanaka Mgbanaka Na Pendant Olu Akwa Silk Foulard